Kana watchOS 7 iri kukupa matambudziko, mhinduro ndeyekudzorera | Ndinobva mac
Kana watchOS 7 iri kukupa matambudziko, mhinduro ndeyekudzorera
Nekuuya kwewatchOS 7 mazhinji matsva akaunzwa mumawadhi akangwara evashandisi. Mimwe yeaya matsva anga achitarisirwa zvakanyanya, senge iwo matsva uye basa rekugeza maoko. Zvimwe zvakakosha zvakanyanya senge kuyerwa kweoksijeni asi Hardware nyowani inodikanwa kuti iite kuti ishande. Nekudaro, izvo zvaiita senge zvinofara kwazvo zvashanduka kuita dambudziko hombe kune vazhinji vashandisi vasingashande zvakanaka watchOS 7. Apple yatowana mhinduro yacho.
watchOS 7 yaunza akawanda matsva uye akanaka kwazvo nhau, asi panongogara paine mukana wekuti ine nyowani software matambudziko anogona kuuyawo. Zvinoita sekudaro Apple Watch Series 3 haina kunyatsoenderana neiyi nyowani software. Vazhinji vashandisi vataura izvi mune akawanda epamutemo Apple maforamu.
Parizvino kambani ingadai isina kupa mhinduro kuzvichemo izvi, kusvikira zvino. Apple inoti kana iwe uine matambudziko neiyo nyowani yekushandisa system, chinhu chakanakisa chaungaite kudzoreredza zvese Apple Watch uye iyo iPhone kune fekitori marongero.
Ndokunge, kana iyo GPS ikasashanda zvakanaka kwauri kana iwe uchishandisa Apple Watch uye isingarekodi nzira uye haina kuiratidza pamepu kana zvoitika kuti bhatiri harigare kwenguva yakareba sepakutanga, iyo dambudziko kunyangwe iri system watchOS 7 inoshanda, Iwe unofanirwa kuzvigadzirisa semushandisi.
Dzosera zvese zviri zviviri, asi hongu, ramba uchifunga kuti unofanira kuita negadziriro yeparutivi pamberi zvekudzoreredzwa, kuti tione kana tichizogadzira dambudziko rakakura kupfuura ratiri parizvino uye tiri kuzorasa data rese. Ini ndinofungidzira kuti Apple ichaenderera ichitsvaga mhinduro muchimiro che software yekuvandudza, nekuti ini ndinonzwisisa kuti kusiira mutoro kumushandisi hakuite senge chakanakisa pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kana watchOS 7 iri kukupa matambudziko, mhinduro ndeyekudzorera
Ndiri kunetseka kuvhura iyo Mac neApple Watch, pane chaunoziva here nezve dambudziko iri?
Dhawunirodha YouTube Mavhidhiyo kune Mac yako neKK Video Downloader
Shanduko yaGreg Joswiak yaPhil Schiller inoitwa zviri pamutemo